DHAGEYSO: Shirweyne ka socdo magaalada Mombasa - Iftiin FM
DHAGEYSO: Shirweyne ka socdo magaalada Mombasa
by Iftiin FM Reporter May 12, 2022 May 12, 2022
Xubno ka socda machadka hanti dhowrka dalka ayaa magaalada Mombasa uga qeyb galaya shirweynaha 19-aad ee hanti dhowrka kaas oo ujeedadiisu tahay qiimeyn iyo dib u eegis caqabadaha hortaagan hanti dhowrka guud ee dalka .
Xooghayaha guud ee Xisbiga Jubillee oo loogu baaqday in uu is Casilo.
Guddoomiyaha Machadka Hanti-dhawrka gudaha David Wagasha ayaa sheegay in hanti-dhowrayaashu ay kaalin muhiim ah ka qaataan hubinta in dhaqaalaha loo isticmaalo ujeeddooyin loogu talagalay marka loo eego dowladda iyo hay’adda.
Milkiilayaasha baararka khamriga oo digniin adag loo diray.
Mr David Wagasha ayaa carabka ku dhuftay in howlaha hanti dhowrka gudaha ay door muhiim ah ka qaataan qiimeynta maamulka, maareynta khatarta iyo hababka xakameynta gudaha isagoo xusay in maamul goboleedyada ay caqabad weyn ka haysato dhanka qaab dhismeedka.
Ardey baaq uu diray dowladda dhexe .
Xoghayaha maamulka wasaaradda warshadaha iyo horumarinta ganacsiga David Osiany ayaa sheegay in hanti-dhowrayaashu ay door muhiim ah ka qaataan la dagaalanka musuqmaasuqa
3 qof oo lagu dilay ismaamulada kala Baringo iyo Elgeyo Marakwet